Google Fit dia nohavaozina tamin'ny fampidirana fanazaran-tena sy widget amin'ny fisefoana | Androidsis
Google Fit dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana fanazaran-tena sy widget amin'ny fakan-tsary
Ireo mpanamboatra fitaovana finday lehibe indrindra, na Google, Samsung na Google, dia manome ho an'ny mpampiasa andian-jotra izay azontsika atao raketo an-tsoratra tsy ny fampihetseham-batana fotsiny, fa ankoatr'izay dia manolotra antsika ny antony manosika ilaina hahafahantsika mamporisika antsika hifindra sy hahatratra ireo tanjona isan'andro.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay dia hitantsika ny nanombohan'ny Google tsy hanovana anarana ny serivisy sasany fotsiny, fa koa nanova ny lozisialy maneho azy ireo, miaraka amin'ny Google Fit izay iray amin'ireo farany nahazo ity fanavaozana ity. Raha mampiasa Google Fit tsy tapaka ianao hanaraha-maso ny asanao ara-batana dia sambatra ianao, nanomboka tamin'izay ny fanavaozana manaraka dia hitondra antsika ireo widgets indray.
Ilay fanavaozana izay nahazo ny fanavaozana volana vitsivitsy lasa izay ary nahatonga anay ny mpizara vaovao, nanala tanteraka ireo widgets ahafahantsika miditra haingana amin'ny fanazaran-tena isan'andro nataontsika. Ny antony nanesoran'i Google azy dia mety tsy ho fantatsika velively, saingy soa fa tafaverina izy ireo.
Aorian'ity fanavaozana farany ity, Google Fit dia manolotra widget roa ho antsika. Amin'ny lafiny iray dia hitantsika ilay iray izay mampiseho amintsika ny minitra ny fihetsehana sy ny fo, fa kosa ny iray kosa mampiseho antsika ny dingana vita sy ny kaloria nodorana niaraka tamin'ny metatra nandeha.
Ao amin'ny pejy fandraisana an'ny fampiharana dia hiseho izy io ny fiofanana farany farany izay nataonay. Rehefa manampy fiofanana vaovao, dia azontsika atao ny miditra amin'ny tanjaky ny iray ihany mba hahazoana angon-drakitra mazava kokoa momba ny fo arakaraka ny hamafin'ny fampiharana.
Farany fa tsy farany, Google Fit for Wear OS dia mampiseho amintsika ny mety hisian'ny manao fanazaran-tena mitovy amin'ireo izay mety ho hitantsika na amin'ny Samsung Gear, toa ny Fitbit Ionic sy Versa ary koa amin'ny Apple Watch, fiasa iray izay tsy manome antsika mampiavaka manokana, fa lasa lasa tsy maintsy manana.
Google Fit: Hetsiky ny hetsika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Fit dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fampidirana fanazaran-tena sy widget amin'ny fakan-tsary
Ny varotra OnePlus 6T dia mihoatra ny OnePlus 6 hatramin'ny 249%
Redneck Rush dia mpihazakazaka tsy manam-petra izay mampiasa fizika zavatra tsara